शिवशक्ति विद्यालयको लाखौँ रकम अनियमितता – Vision Khabar
Visionkhabar । १३ भाद्र २०७७, शनिबार १७:१५ मा प्रकाशित
जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–९, लामाकाट्टेस्थित शिवशक्ति आधारभुत विद्यालयमा रकम हिनामिना भएको पाइएको छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक धनबहादुर डाँगीले १ लाख ३० हजार रकम हिनामिना गरेकोे पाइएको हो ।
विद्यालयको भवन निर्माण योजनाबाट वडाअध्यक्षले रकम लिएको शिक्षक डाँगीले आरोप लगाएका थिए । यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक डाँगीले विभिन्न शीर्षकको रकम अनियमितता गरेको दाबी गरेको छ ।
विद्यालय सुधार कार्यक्रमको १५ हजार २०७६÷०४÷१३ गते विद्यालयको खाताबाट शिक्षक डाँगीले निकासा गरी हिनामिना गरेको वि.व्य.स. अध्यक्ष वलीको आरोप छ । यस्तै विद्यालयको, बुक कर्नरको २१ हजार ६ सय रुपैयाँ शिक्षक डाँगीले विद्यालयको खाताबाट मिति २०७६÷०३÷१६ गते निकासा गरी हिनामिना गरेको वलीले बताए ।
शिक्षक डाँगीले बालकक्षाको सहयोगीको तलव २४ हजार, लेखापरीक्षणको १० हजार रकम २०७६÷०२÷२३ गते विद्यालयको खाताबाट निकासा गरी विद्यालयलाई जानकारी नदिइ हिनामिना गरेको प्रधानाध्यापक धनशरा जैसीले बताइन् ।
कार्यालय सहयोगीको तलब र बालशिक्षा सहयोगीको पोषाकवापतको २० हजार रकम विद्यालयको खाताबाट मिति २०७५÷०६÷२१ गते निकासा गरेर हालसम्म सहयोगीहरुलाई नदिएर हिनामिना गरेको वि.व्य.स. अध्यक्ष वलीले जानकारी दिए । विद्यालयको भवन उद्घाटन र लेखापरीक्षणको ४० हजार मिति २०७६÷०४÷२३ गते विद्यालयको खाताबाट निकासा गरी हिनामिना गरेको समेत वलीको दाबी छ ।‘विद्यालयको भवन उद्घाटन भएन, उद्घाटनकै लागि निकासा गरेको पैसा अहिलेसम्म विद्यालयको खातामा आएको छैन ।’ उनले भने, ‘शिक्षक डाँगीले १ लाख ३० हजार ६ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन । हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७६ असोज १० गते बैठक बसी कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएको भवन उद्घाटन र लेखापरीक्षणको रकम असुली गर्ने निर्णय ग¥यौँ ।’
विद्यालयको भवन निर्माणमा वडाअध्यक्ष धुर्वप्रसाद पौडेलले आफुबाट घुस लिएको भन्दै पूर्व प्रधानाध्यापक समेत रहेका धन बहादुर डाँगी जिल्लाका सञ्चारमाध्यम गुहार्दै खलंगामा आएका छन् । डाँगीले वडाध्यक्षलाई आरोप लगाएपनि डाँगीले नै रकम हिनामिना गरेको विद्यालयले बिहिवार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
जो चोर उस्कै ठुलो स्वर भने जस्तै आफै विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको वडाअध्यक्ष धुर्वप्रसाद पौडेलले बताए । शिक्षकले आफुलाई आरोप लगाए पनि आफैले रकमको हिनामिना गरेको पुष्टि भएको पौडेलले बताए ।
औषधी उपचारको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबाट ५५ हजार सापटी लिएको तर विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई बुझाएको पौडेलको दाबी छ । ‘म बिरामी भएको बेला अध्यक्षबाट पैसा लिएको हुँ ।’ उनले भने, ‘काठमाडौँ गएर उपचारपछि १५ दिनपछि ५५ हजारनै फिर्ता दिएको छु । विद्यालय पठनपाठन गराउने समयमा शिक्षक मदिरा सेवन गरेर आउने ? विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न खोज्ने ?’
उता विद्यालयका शिक्षक धन बहादुर डाँगीले वडाध्यक्ष र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलोमतोमा आर्थिक रकम हिनामिना भएको आरोप लगाएका छन् । वडाध्यक्ष पौडेलले विद्यालयको भवन बनाउनको लागि दौडधुप गरेको भन्दै पैसा मागेको डाँगीको दाबी छ । ‘विद्यालयको रकम वडाध्यक्षले हिनामिना गरेका छन् । वडाअध्यक्ष धुर्वप्रसाद पौडेलले म बाट ५५ हजार घुस लिएका हुन ।’ उनले भने, ‘आव २०७५÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको २० लाख अनुदानमा बनेको दुई कोठे विद्यालय भवनबाट उक्त रकम लिएका छन् ।’ विद्यालय भवन योजना पार्न दौडधुप गरेबापत अध्यक्ष पौडेलले आफुबाट उक्त रकम लिएको शिक्षक डाँगीको दाबी छ ।
शिवशक्ति आधारभुत विद्यालय लामाकाट्टेमा आव २०७५÷०७६ मा भेरी नगरपालिकाको २५ लाख अनुदानमा आरसिसी पिलर र ढलान सहितको चार कोठे भवन बनेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको २० लाख अनुदानमा दुई कोठे ट्रष्ट निर्माण भएको हो । मन्त्रालयको अनुदानमा अग्रिम आयकर र बहालकर कट्टी गरेर विद्यालयलाई १९ लाख ७० हजार भुक्तानी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेरी नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष धुर्वप्रसाद पौडेलले विद्यालय भवन निर्माण आयोजनाबाट ५५ हजार घुस खाएको भन्ने आरोपको बिहिवार खण्डन गरेका थिए ।